Duomo of Florence | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialantsasatra any Eropa, Italia
Iray amin'ireo tempoly lehibe indrindra ao amin'ny fivavahana lazaina fa kristiana ny Katedraly Florence, fantatra amin'ny anarana hoe Duomo. Azo antoka fa nahita izany tamin'ny sary sy torolàlana momba ny dia ianao satria mariky ny tanàna italiana io ary tsy azo hadisoana ny maso sy ny dome miavaka ao aminy. Na izany aza, tsy misy mampitaha ny zavatra niainany tamin'ny fahitana azy manokana sy ny fandehanana anatiny sy ny manodidina azy.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny Duomo of Florence ianao dia mamporisika anao tsy hitsahatra hamaky satria amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny iray amin'ireo sangan'asan'ny kanto Gothic sy ny Renaissance Italiana voalohany izahay. Avia ho namanay!
1 Ny niandohan'ny Duomo of Florence
2 Dimensions an'ny Duomo any Florence
3 Atin'ny Duomo
4 Miakatra amin'ny dome
5 Ny manodidina ny Duomo any Florence
Ny niandohan'ny Duomo of Florence
Ny fananganana ny Katedraly Santa María del Fiore dia nanomboka tamin'ny 1296 tao amin'ny tempoly taloha natokana ho an'i Santa Reparata, izay lasa kely loatra ka tsy zakan'ny mpino amin'ny tanàna mitombo. Ny asa dia natomboka teo ambany fitarihan'i Arnolfo di Cambio ary taorian'ny nahafatesany, ny Guild of Wool Art izay tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ireo asa no nanakaramana an'i Giotto, izay mpiandraikitra ny tilikambo indrindra, ary avy eo Francesco Talenti.
Tamin'ny 1380 dia vita ny tafon'ireo trano telo sy ireo andohalambo telo voalohany. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny fananganana ny dome dia nanomboka teo ambany baikon'i Filippo Brunelleschi, ilay mpanao mari-trano Renaissance voalohany, izay tsy maintsy niatrika olana ara-teknika satria tsy afaka nanohana ireo rafitra nentin-drazana niarahan'izy ireo tamin'izany fotoana izany ny lanjan'ny dome be loatra. ... Taorian'ny fianarana an-taonany maro dia namorona fomba vaovao izy izay nahatonga ny valizy roa sosona ho an'ny tenany.
Ny haingon-trano anatiny ao amin'ny dome an'ny Katedraly Florence dia nataon'i Giorgio Vasari sy Federico Zuccari ary ny sehatra dia maneho ny Fitsarana Farany.
Dimensions an'ny Duomo any Florence
Ny Katedraly Santa Maria del Fiore na ny Duomo no fiangonana lehibe indrindra fahefatra eto ambonin'ny planeta aorian'ny Saint Peter any Roma, Saint Paul any London ary ny Catérial Milan. 160 metatra ny halavany, 43 metatra ny sakany ary 90 metatra ny halavany. Ny haavon'ny atin'ny kibon'ny majestic dia 100 metatra sy 45,5 metatra amin'ny savaivony ivelany.
Miaraka amin'ny drafitra lakroa latina sy ny naves telo tohanan'ny andry telo, ny Duomo dia miavaka amin'ny fahaizany mandanjalanja ary manana fahatsapana fahabangana ara-potoana. Rehefa naorina tamin'ny volam-bahoaka ny katedraly, ny zava-kanto sasany ao amin'ity fiangonana ity dia natokana ho an'ny olona malaza sy mpitarika miaramila ao Florence.
Ny ankamaroan'ny singa haingon-trano toy ny sary sokitra na sary ara-pivavahana tany am-boalohany dia naseho tao amin'ny Museum del Duomo Museum noho ny antony fitehirizana. ka nosoloana kopia tao amin'ny Katedraly, Battistero ary Campanile izy ireo. Ato amin'ity tranombakoka ity dia aseho koa ireo modely manazava sy ny drafitry ny fananganana an'i Santa Maria di Fiore.
Ao anatin'ny Duomo dia tsy mahazo mitsidika ireo trano fiangonana fa eo akaikin'ny fidirana dia misy fidinana hidina amina crypt kely hita teo afovoan'ny taonjato faha-XNUMX izay ahitanao ny fasan'i Brunelleschizaho, mpanoratra ny dome malaza an'ny tempoly ary sarivongana haingo marobe. Voninahitra lehibe, satria tamin'izany fotoana izany, ny mpandrafitra dia tsy nalevina tao anaty vala.
Miakatra amin'ny dome
Ny fiakarana mankany amin'ny dome du Duomo dia zavatra niainana iray. Tokony ho vonona ara-tsaina ianao hiakatra ireo dingana mihoatra ny 450 amin'ny endrika sy karazany samihafa manasaraka ny fomba fijery amin'ny arabe. Ilaina ny fananana fanahy mampientanentana satria ny faritra farany dia natao mitsangana eo anelanelan'ny valizy ivelany sy anatiny.
Na izany aza, ireo izay te-hahita ny valindrihana any Florence amin'ny fomba milamina kokoa dia afaka mankany amin'ny Campanile an'i Giotto. Ny safidy roa dia tsara amin'ny fankafizana zavakanto amin'ny endrika madio sy fomba fijery manaitra.
Ny manodidina ny Duomo any Florence
Ao amin'ny afovoan-tanànan'i Florence, indrindra any amin'ny faritra manodidina ny Duomo, dia misy tranombakoka sy fanangonana maro hanamontsana ny kanto tsara indrindra ao an-tanàna.
Mandeha minitra vitsivitsy miala ny Duomo no misy ny tranombakoka Bargello. Ny sanganasan'i Michelangelo, Donatello ary Verrocchio dia mipetraka eto, na dia eo aza ny fanangonana zavakanto Silamo sy fitaovam-piadiana.
Ao ambadiky ny Katedraly Florence dia misy ny tranombakoka Opera del Duomo miaraka amina fanangonana zava-dehibe ny sanganasan'i Donatello ary koa sombin-javatra sarobidy hafa avy ao amin'ny Duomo, the Baptistery and Giotto's Campanile.
Raha te hahalala momba ny anthropology, afaka mandeha any amin'ny National Museum of Anthropology and Ethnology ao amin'ny Non Finito Palace amin'ny alàlan'ny del Proconsolo isika.
Ny toerana mahaliana hafa ao an-tanàna dia ny Palazzo Vecchio ao amin'ny Piazza della Signoria. Eo akaikin'ity tranobe ity no misy ny Uffizi Gallery, iray amin'ireo toerana ara-kolontsaina be mpitsidika indrindra eto Florence, mitahiry sary hosodoko toy izany: The Birth of Venus avy amin'i Botticelli na ny Adoration of the Magi nataon'i Leonardo da Vinci.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Duomo of Florence
Tora-pasika tsara indrindra any Espana